Kulankii PSG iyo Real Madrid waa kulanka ugu weyn ee heerka CL, laakiin gadaal ka daawo muuqaalka, labada koox ayaa isku haysta jahwareer. - KU SAMEEYAAN NABADA
ACCUEIL » SPORTS Kulankii PSG iyo Real Madrid ayaa ah kulanka ugu weyn wareega group-yada CL, laakiin gadaal ka daawo muuqaalka, labada koox ayaa isku haysta jahwareer.
Tani waa inay ahaato ciyaarta, Naadiga Paris Saint-Germain, oo ku guuleysata abaalmarinta ugu muhiimsan ee kubada cagta ka dib seddex xilli oo isku xigta oo ah kulamada muranka badan dhaliyay. Martidooda, Real Madrid, waa buluugga dhiigga ee ciyaarta, ayaa ah kala badh habka dib u dhiska, maadaama ay sii wadaan Koobkooda '14e European Cup' oo ah daawo ka hortaga xilli ciyaareedyada isdaba jooga ee qaranka.
Laakiin tani maahan kiiska.
Real Madrid ayaa ku dhameysatay kaalinta seddexaad horyaalkii sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkii ka hor, iyadoo celcelis ahaan ah dhibco ah '19 dhibic': oo ka fog xawliga kooxaha mustaqbalka horyaalka La Liga. labada xilli ciyaareed, Barcelona. Seddexdii wareeg ee aan laga fileyn Champions League ayaa ka careysiisay qeyb ka mid ah xanaaqa, laakiin inta badan waxay filayeen soo nooleyn, gaar ahaan ka dib bixitaankii Ronaldo iyo is casilaadiisa. Zinedine Zidane xagaaga 2018.
Bedelkii, Zidane wuxuu soo laabtay halkii uu dib u dhisi lahaa, waxaan sameynay waxoogaa hagaajin ah, oo leh Eden Hazard iyo goolhayaha Thibaut Courtois (oo dhacday xagaagii la soo dhaafay oo ka yaraa jaangooyooyinka mararka qaarkood) keliya ee soogalootiga cusub ee cusub. Sagaal ka mid ah ciyaartooyda 10 ee inta badan la isticmaalo illaa iyo hadda sidoo kale waxay joogeen ugu horreeya seddexdooda koob ee isku xigta ee Champions League; kasta oo kale, Vinicius Junior ma laha 20 sano kahor xagaaga soo socda
- Laurens: Ha ka fileynin inay PSG ku guuleysato Yurub sannadkan
- Xagaaga xiddigaha aan loo baahnayn: Muxuu Bale iyo Neymar u dhaqaaqin
Ogden: Kala yaac kooxaha Champions League
PSG ayaa loo maleynayay inay tahay xoog ku soo kordha Qatar ee kubada cagta Yurub, iyadoo sheeganeysa labada dhaxalka muuqata Cristiano Ronaldo - labo ka mid ah Lionel Messi ( Neymar ) iyo waxa soo socda ( Kylian Mbappe ). Kii ugu horreeyay wuxuu isku dayay inuu jihada oo dhan tago, kii ugu dambeeyay ayaa dhaawacmay. Marka laga hadlayo lacagta Qatar, waxaa laga yaabaa inay cirbadda dib u soo celiso laba xilli, laakiin hadda, sababta oo ah FFP iyo saadaalinta maaliyadeed ee aadka u sarreysa, ayaa lagu qasbay inay bixiyaan khidmadahooda, sida hawlgallada kale. qoyska.
Toddobaadkii hore, Neymar, oo ahaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa taariikhda ciyaarta, ayaa ugu dambeyntii ku soo laabtay PSG oo uu ku salaamey majaajillo isugu jira aflagaado, aflagaado iyo asaga oo ku booriyay inuu baxo. Wuxuu dabcan sameyn lahaa haddii kooxdu ay heshiis la gaarto oo dib loogu celiyo Barcelona. Sida uu Neymar laftiisu farta ku fiiqay, kooxda PSG ayaa horjoogsatay dhaqdhaqaaqa. (Ama, maxaa yeelay sheeko kastaa waa Rashomon u gaar ah oo leh dhinacyo badan, "waa diiday inuu iibiyo xiddig xiddig ka yar intii ay moodayeen inay u qalmaan.")
Neymar, si kastaba ha noqotee, waxba ma ahan haddii uusan ahayn pro. Xirfadlayaal waalan, calool xumo, mararka qaar qaadashada xorriyadda, oo leh dabeecad yaab leh inuu bogsado markay tahay dhalashadiisa walaashiis laakiin si kastaba ha ahaatee xirfadle. Iyo nin ka saari kara sixirka wax aan jirin, sidii uu sameeyay intii lagu jiray dhaawaca, durbaan garaacis cod dheer leh kaasoo u ogolaaday PSG inay ka adkaato Strasbourg.
(Kama qeyb geli doono Arbacada - waxaa laga mamnuucay Champions League sanadkii hore ka dib markii PSG ay ka hartay PSG, laakiin hooskiisa ayaa sii wadi doona inuu miisaan culus ku yeesho guulaha kooxda xilli ciyaareedkan.)
Wax ka yar 24 Saacado yar ka dib iyo boqol kiiloomitir, madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez, ayaa ka hor yimid shirkii sanadlaha ahaa ee guud ee naadiga oo uu kala kulmay cabasho iyo niyad jab. Perez ayaa yidhi: "dadku waxay dhahaan waan garanayaa tirooyinka, laakiin hadaan wax uun aqaano waa kubada cagta!" Ayuu yidhi Perez. “Waxaa jira kooxo ku guuleysta horyaal oo aan ku guuleysan wax Yurub ah sanado badan. Maxaanse u koray? Sababtoo ah waxaan ku guuleysanay European Cup waqtiyadii 13. ”
Gareth Bale, bidix iyo Real Madrid ayaa ku jira marxalad kala guur ah, xitaa awooddooda xiddig. Sawirada cayaaraha tayada / Sawirada Getty
Perez sidoo kale waa inuu meesha ka saaraa su’aal ku saabsan salka kabtanka naadiga oo ka yimid Sergio Ramos . Daafaca Isbaanishka wax badan ayuu ku soo kordhiyey afar ka mid ah goolalkan, ugu dambeeyay biloowga 16, laakiin qaar ka mid ah, wuxuu noqday isha mashquulka Ramos qudhiisa waa inuu shir jaraa'id qabtaa bishii May ee la soo dhaafay si uu ugu dhawaaqo meelna ma aadi jirin. Su'aasha Perez wuxuu ku dhaleeceeyay Ramos jaceylka uu u qabo warbaahinta bulshada, mashruucyada ka baxsan (sida filimka Amazon u gaarka ah ee isaga laftiisa) iyo xaqiiqda ah inuu "xirtay koofiyad casaan ah oo ka dhigtay inuu u ekaado dalxiise Sweden ah." ".
Bulshooyin badan ma caddaalad sameyaan xaaladda labada naadi. Waxaan soo marnay "astaanta madadaalada" rubicon sanado ka hor, markaa malaha kore ma aha inay noqdaan kuwo la yaab leh. Laakiin waxaa jira waxyeelo wadareed oo la socota (aan ka hor tagno, dakhliga ku baxa iyada oo loo marayo kafaala-qaadeyaasha iyo aqoonsiga sumaddiisa) ee isku-urursiga xiddigyada: isku-dheellitirka labada naadi iyada oo culeys la saaray qandaraasyada halyeeyada culus. in aysan lumin karin iyo dhaawaca ay isu geystaan
Waxaa sidoo kale jirta xaqiiqda ah in dad aad u yar ay arkeen sannad ka hor, taas oo uga sii dardarta labada naadi.
PSG waxay safka hore kaga jirtaa ciyaar wanaaga maaliyadeed iyo qawaaniinta UEFA. kuwaas oo nidaamiya kharashaadka naadiyada kasta. Sannadkan iyo sannadihii la soo dhaafay, safka PSG wuxuu ka koobnaa xuddunta suufiyada la jecel yahay - Angel Di Maria, Thiago Silva Edinson Cavani Marquinhos - laakiin sidoo kale tiro badan oo ka mid ah jilaayaasha buluuga ah iyo buluuga-buluuga ah. Noocyada sida, tusaale ahaan, Colin Dagba 21 sano jir ah oo isagoo saftay kulankiisii ​​ugu heerka ugu sareeyay oo keliya sanadkii hore, ama Eric Maxim Choupo-Moting kaasoo ciyaaray 31 sanadkii hore ka dib markii uu ku soo biiray kooxda Stoke, oo ah koox ku dhameysatay kaalinta labaad ee Premier League sanadkii hore. Tani waa sidoo kale sababta, ka dib sannado badan oo bilaash ah, ay dhab ahaan faa'iido ka heleen daaqadda kala iibsiga xagaaga, iyagoo dhammaystiray kooxda wakiilo bilaash ah ( Ander Herrera ee Man United), isdhaafsiga (ilaaliyaha saxiixa Keylor Navas Real Madrid iyo diraya Alphonse Areola dhanka kale) iyo amaahda ( Mauro Icardi ka soo jeeda Inter).
- Sheekada qeexan ee ku guuldaraysiga Neymar ee ku soo laabashada Barcelona
- Saxiix oo ciyaar ciyaarkeena cajiibka ah ee Champions League
Navas iyo Herrera waxay qaateen inta badan xilli ciyaareedkii hore halka Icardi uu ahaa mid aan loo jeclaan Inter. in laga joojiyay lix toddobaad bartamaha xilliga sanadkii la soo dhaafay iyo in si cad loogu wargaliyay oo uu ku celceliyay in adeegyaashiisa aan loo baahnayn. Dhammaan saddexda waa halyeeyo abtirsiinyo leh boodh ay garbaha ku hayaan waadna fahmi kartaa caqliga si aad ugu dhaadhiciso rabitaankooda ah inay soo nooleeyaan shaqadooda. Laakiin laga yaabee in ugu muhiimsan, dhammaan seddexda si isku mid ah ayaa u jaban.
Xagaagii Neymar ee xagaagii la soo wareejiyay ayaa qarin doonta xiriirka kala dhexeeya PSG iyo taageerayaasha. Mehdi Taamallah / NurPhoto via Getty Images
Real Madrid waxay heysatey xagaa xagaaga, waxay soo saartay ku dhawaad ​​250 milyan oo doolar afar ciyaartoy: daafacyada Ferland Mendy iyo Eder Militao, garabka Hazard iyo weeraryahan Luka Jovic . Dhibaatada ayaa ah inaanan wali arkin wax badan - labadooduba waxay bilaabeen hal ciyaar - taas oo adkeyneysa inaan aad u faraxsanaano. Intooda badan tani waxay ku saabsan tahay dhaawacyada (Hazard kaliya wuxuu soo bilowday Sabtidii), laakiin xaqiiqda inay tahay dhinac isbedel ah.
Zidane wuxuu leeyahay nidaam iyo shaqaale wareegeysa waana inaad filaysaa inaad aragto. Magaalada Paris: Ramos waa la hakiyey halka Marcelo Isco, Marco Asensio et Luka Modric tiirarkii tartankii hore ee Champions League, dhammaantood waa la dhaawacay.
Taageerayaasha Madrid wax badan ayey arkeen xilli ciyaareedkan: Gareth Bale et James Rodriguez Laba ciyaartoy oo ay ku qarash gareeyeen xagaagii isku dayay inay goostaan. Bide, oo ah mid ka mid ah ciyaartooyda ugu mushaharka badan adduunka, ayaa gabi ahaanba waxaa uga digay Zidane inuu kujiro lacag dheeri ah. Laakiin, oo aan dooneynin inuu hoos u dhigo mushaarkiisa - iyo sida qofna uusan dooneynin inuu la jaanqaado mushaharkiisa sannadlaha ah in kabadan 30 milyan et meelna ma uu aadin.
Bale, kaasoo qaab ciyaareedkiisu kala duwan yahay sumcadda aan la garanayn illaa MIA (dhaawacyada soo noqnoqda), ayaa inta badan taageerayaasha iyo warbaahinta ay ka xanaaqaan dambiyada ay ka midka yihiin inuu iska indhotiro ereyga saxda ah iyo inuu aad uga careysnaado. golf. (Wuxuu heystaa sagaal god oo ku yaal beertiisa weyn, dhaawacyadiisa qaarna waxaa loo aaneeyay dhaqankiisa.) Laakiin markii uu Zidane ogaaday inuu ku dhegan yahay, wuxuu qaatay liinkiisa iyo sameeyey lemonade: Bale wuxuu bilaabay seddexdii ugu horeysay ee Real Madrid iyo James, sida James, wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu guulaha badan.
Waxyaabaha aan laga fileynin labada dhinacba tanina waxay noqon kartaa xudunta ceebta iyo walwalka ay qabaan taageerayaasha labada naadi.
Xaaladahan, Champions League waa mid nassi ah, xitaa waa la laba-labeeyay. Wax qabad xoogan iyo natiijo waxaadna bilaabi kartaa inaad sheekada ku jihada dhankaaga. Hadaad tahay PSG, xasuusi dadka in Mbappe uu soo laaban doono (laakiin ma ahan Arbacada: waa uu dhaawacan yahay sida Edinson Cavani et Julian Draxler ). Hadana hadaad tahay Madrid, waxaad iibineysaa khadka aad weli tahay heerka dahabiga ah ee Yurub, in Zidane uu weli yahay daaweyn Galactico Hadalka iyo in Hazard yahay, xaqiiqdii, waa mid wax ka beddalaya ciyaarta.  Laakiin sidoo kale waxaa jira faa'iido darro. Qaado tallaal oo waxay cusbo ku badan tahay boogaha furan. Niyad jab iyo xanaaq ayaa kuwada nool isla xaafada cabsi iyo raaxo daro.
Labadan naadi, waa waqtigii laga bixi lahaa magaalada.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog-marcottis-musings/story/3944384/psg-vs-real-madrid-is-biggest-game-of-cl-group-stage-but-behind-the-scenesboth-teams-are-a-mess
Guangzhou ayaa garaacday Kashima si ay u gaarto semi-finalka Asia
Koobka Kooxaha Horyaallada Yurub - LdC: Caannimada Dortmund ayaa gashay halyeeyada! - FOOT 01